Chịkwa Omenala-Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi | Martech Zone
Chịkọta Omenala-Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Tọzdee, Eprel 14, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Danielle Ciappara
Omume oriri mgbasa agbanweela nke ukwuu n'ime afọ ise gara aga, mkpọsa mgbasa ozi na-agbanwe iji na-aga n'ihu. Taa, a na-ebugharị dollar mgbasa ozi site na ọwa anọghị n'ịntanetị dị ka TV, mbipụta, na redio gaa na dijitalụ na ịzụ ahịa mmemme mmemme. Agbanyeghị, ọtụtụ ụdị amachaghị nke ngbanwe nke usoro ezipụtara maka usoro mgbasa ozi ha na dijitalụ.
A na-atụ anya ka TV ga-edekọ ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ (34.7%) nke oriri mgbasa ozi ụwa site na 2017, agbanyeghị oge ejiri ekiri mmemme mgbasa ozi na TV ga-agbada site na 1.7% kwa afọ. N'ụzọ dị iche, a na-ebu amụma oge ịbanye na ịntanetị site na 9.4% kwa afọ n'etiti 2014 na 2017.
Mgbasa ozi TV, ọbụlagodi na ịwụnye DVR ma na-ebelata elele anya, ka na-enye ike kachasị ike na mmata Dị ka onye na-ere ahịa n'ọhịa ebe telivishọn ka bụ ebe kachasị elu (ma ọ bụghị ruo ogologo oge), ọ dị mfe ịghọta enweghị ike ịnwale nnwale na mgbasa ozi ọhụrụ na ihe ahịa site na dijitalụ. Mgbanwe nke oriri mgbasa ozi agbanweela kpamkpam otú ndị mgbasa ozi si atụle ọdịnaya na nzaghachi nke ọma ma mgbanwe a na-ewere ọnọdụ na ndị mgbasa ozi ika.
Site na nzaghachi nzaghachi, ọkọlọtọ, mpịakọta, nnabata saịtị, na ichebe ngwaọrụ na-arụkwa ọrụ ahịa ahịa dị mma. Ndị na-ere ahịa maara na enwere ike iji data nke mbụ mee ihe iji zube ndị ọrụ ozugbo ha nọ n'ahịa iji tọghata. N'ihi ya, ndị na-ere ahịa ga-edozi usoro mgbasa ozi n'etiti iru akara, oge, mmata, na nzaghachi. Ya mere, ọ dị mkpa ịtọpụta eziokwu nke otu dijitalụ nwere ike isi metụta arụmọrụ mkpọsa a na-akwụ ụgwọ maka ekele maka akara ngosi TV.
Ọ dị oké mkpa ịkọwa ya mere ọtụtụ mkpọsa na usoro nke pịa-site na ọnụego na ụgwọ-kwa-aquisition na-eweta uru nke na-eme ka TV rute na ugboro ole. Onye na-ere ahịa kwesịrị ịghọta na ọ bụrụ na ndị mmadụ na-apị na mgbasa ozi gị, nke ahụ pụtara na ha nwere mmasị na ya-mana ha kwesịrị ịga n'ihu karịa nke ahụ iji ghọta ihe mere ha ga-eji gbanwee uche ha pụọ ​​na usoro mgbasa ozi ọdịnala ma mata na dijitalụ nwere ike ijikọta na usoro ahia na nkwado ebumnuche na irè.
Ckingchọgharị njem Ndị Ahịa
Agbanyeghị na mgbasa ozi dijitalụ nwere njiri mara siri ike n'ihi ike iji soro njem ndị ahịa site na mmata gaa na ntughari, ọkachasị maka ecommerce, arụmọrụ ya kwesịrị itinye na mmata TV, ọ bụghị nkewa. Maka ịkwọ ụgbọala, nke a nwere ike ịbụ ntakịrị aghụghọ, mana mmepe na nkuchi nke teknụzụ mgbama na-egbochi oghere ahụ. Ebe ọ bụ na mkpọsa dijitalụ na-elekwasị ndị ọrụ anya ka ha nọ n'ahịa, ịkwesighi iwepụ ozi ugboro ugboro iji zube ndị na-azụ ahịa bụ ndị nwere ụdịrị ama ama.
N'ihe banyere dijitalụ, nhazi ogo na oke. Ijide n'aka na ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ ha dị iche iche ghọtara nke ọma ihe ịma aka, ihe ngwọta na mmụba dị irè nke ijikọta dijitalụ na TV dị oke mkpa, dịkwa ka uru ekele ọ bụla nwere maka ịga nke ọma mkpọsa. E nwere ụzọ dị iche iche esi atụ usoro mgbasa ozi na ịnabata asụsụ ọhụụ nke ọ bụla bụ usoro mbụ.
Iche echiche gabigara ọnụọgụ na ịtụleghachi ihe ihe ịga nke ọma na-eme ka ROI dị mma bụ isi. Ọ bụrụ na a tụleghachila oriri mgbasa ozi anyị ma rụgharịa ya site na ụtụtụ nke dijitalụ, mgbe ahụ ụzọ anyị si ele ịga nke ọma na nkewa n'etiti usoro mgbasa ozi ọdịnala na dijitalụ chọrọ mgbanwe.
Tags: digital marketingna-ụgbọala-na-mkpọsaoriri mgbasa ozitelivishọnomenala mgbasa ozi
Danielle Ciappara bụ Digital Media Nchịkọba na Hawthorne Na-eduzi, na-eduga gị n'ụlọnga mgbasa ozi dabeere na mgbasa ozi ọkachamara na nchịkọta na aza ajụjụ ika mkpọsa ihe karịrị afọ 30. Hailing si San Francisco, Danielle bụ mpako Cal na USC grad. O dere akwukwo ndi ozo banyere mgbanwe ndi ozo na nke ndi ozo di na ahia ahia site na nbili dijital na transmedia.
3 Unique Industry Digital Marketing Atụmatụ
Ihe Anyị Mụtara Banyere Nnweta Ahịa site na Swing maka Fences